AKHRISO: Qodobbada Heshiiskii ay Muqdisho ku kala Saxiideen Farmaajo iyo Abiy Ahmed Ali – Awdal State Economic and Political Council
HomeWararka SoomalidaAKHRISO: Qodobbada Heshiiskii ay Muqdisho ku kala Saxiideen Farmaajo iyo Abiy Ahmed Ali
June 16, 2018 Wararka Soomalida
Kadib kulan muhiim ah oo maanta muqdisho ay ku yeesheen madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa lagu heshiiyay ilaa 16 qodob oo muhiim u ah xoojinta iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya.
Qodobada ay ku heshiyeen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa kala ah:-
1.Hoggaamiyaasha labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo badan oo quseeya labada dal,Gobolka iyo guud ahaan caalamka,intii kulankoodi u usocday ayaa labad mas’uull waxay dib u soo cusboonaysiiyeen balanqaadyadii ahaa xoojinta xiriirka ku dhisan walaltinimo,dhaqanka,derisnimada iyo istixgelinta labada dal.
2.Waxaa lagu heshisyay in dib loo soo cusboonaysiiyo xoojinta xiriirka ku dhisan wadashaqeynta guud,xiriirka Diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo la dhowrayo madax banaanida labada dhinac.
3.Labada mas’uul waxay soo dhaweeyeen dhismaha Guddi ka shaqeeya iskashiga labada dal oo horey loogu heshiiyay,kaasi oo ah heer Wasiirro, waxuuna ka shaqeyn doona horumarinta ilaaqaadka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee labada dhinacaba.
4.Sidoo kale hirgelinta xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsuliyado ay labada dowladood si is dhaafsi ah uga sameynayaan magaalooyinka gobolada dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya,fududeynta isdhexgalka bulshada sida socdaalka,gaar ahaan dhinacyada waxbarashada,ganacsiga,dhaqanka.
5.Waxaa la isla gartay muhiimadda iskaashiga horumarinta dhaqaalaha,iyadoo loo marayo maalgashi lagu sameysto labada dal,iyadoo hadafka uu yahay sidii barwaaqo loo gaari lahaa labada dal iyo guud ahaan qaaradda Afrika ugu dambeyntii.
6.Waxaa lagu heshiyay in meesha laga saaro aqabadaha ku horgudban horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal,si loo xaqiijiyo sugnaanta isdhexgalka dhinaca dhaqaalaha iyo in laga kala faa’idaysto awooda wax soo saar ee dadka,sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida Dekedaha,waddooyinka.
7.Qodobka todobaad oo la isla soo hadal qaaday ayaa waxaa kamid ah dhiirogelinta maalgaashiga,gaar ahaan ilaa 4 dekedood,waxaa ay isku raaceen in si wada jir ah loo maalgashado ilaa afar dekadood oo muhiim ah oo kuyaalla Soomaaliya,dhismaha waddooyinka isku xira Soomaaliya iyo Itoobiya,waxaana la dhisidoonaa guddi farsamo oo ka shaqeeya hirgelinta qodobada lagu heshiyay.
8.In laga faa’idaysto awoodda iyo fursadaha dhaqaale ee xagga suuqa,iyadoo la sameynayo maalgelin shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay,taasi oo hadafkeedi uu yahay in fursado shaqo loo abuuro bulshooyinka labada dhinac.
9.In loo baahanyahay xoojinta nabadda iyo xasilooni waarta oo ay kunoolaadaan shacabka labada dal,la iskana kaashado la dagaalanka argagixisada,waxaana si wada jir ah loo cambaareeyey falalka argagixisanimo nooc kasta oo ay ahaadaanba.
10.Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ay uga mahadcelisay dowladda Itoobiya ciidamadeeda oo qeybta ka ah AMISOM sida ay naftoodi ugu hureen in ay shacabka Soomaaliyeed ay ka difaacaan cadowga Alshabaab.
In mudnaan gaar ah la siiyo dowrka AMISOM ee nabadda iyo dib u dhiska Soomaaliya,waxaa la isla gartay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah looga hortago qatarkasta oo ku wajahan gudaha iyo dibadda,waxayna si wada jir ah ugu baaqeen dowladaha kale saaxiibada Soomaaliya in ay kaalintooda ka geystaan dib u dhiska iyo nabadeynta Soomaaliya.
12.Waxay si wada jir ah oo cad u sheegeen in dhankasta oo xushmeeyo madaxbanaanida dalka kale,iyo sharafta dhuleed iyo kala madaxbanaanida siyaasadeed,iyadoo loogu baaqay dhamaan hogaamiyaasha Soomaaliyeed in si dhab ah uga wada shaqeeyaan midnimada iyo wada jirka Soomaaliya.
13.Arrimaha caalamiga ah,waxaa ay ugu baaqeen QM in ay la timaado nidaam waxtar badan oo isku-dhafaan oo leh dib-u-habeyn iyo xoojin,
Iyadoo sidoo kale isku raacay in loo dodo wadamada Afrika dhibaatooyinka haysat in xal waara loo helo.
14.Raiisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku ammaanay hoggaanka dowladda Soomaaliya sida ay uga dhabeeyeen balanqaadyadii ahaa in dalka horumar lagu soo dabaalo,waxaana uu xusay in dowladdu ay ku guuleystay in ay ka gudubto caqabado badan islamarkaana ay u jahaysatay dhanka horumarka.
15.Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyey raiisul wasaaraha Itoobiya xilka cusub ee loo doortay dhawaan,wuxuuna Madaxweyne farmaajo ku booriyay in uu fuliyay qorshihiisa isbedelada ah iyo hadafka dheer,uuna noqdo mid waxtar uleh Itoobiya iyo guud ahaan gobolka.
16.Madaxweyne Farmaajo oo ku hadlayay magaca shacabka iyo dowladda Soomaaliya ayaa u mahadceliyay raiisul wasaare Abiy Axmed Cali,kaasi oo dhankiisa madaxweynaha Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyey isaga iyo wafddigiisa.
Wafddiga Ra’iiusl wasaare Abiy Axmed Cali ayaa kulanka kadib dib ugu laabtay Dalkiisa Itoobiya,waxaan sagootiyay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo xubno ka tirsan Golayaasha Dowladda.
Halkan ka akhri War-murtiyeedka oo Luuqada Ingiriisiga ku qoran:-